Etazonia: Teratany Cherokee Miady Ho An’ny Dongontany Masina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2018 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Nederlands, македонски, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, Português, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2010).
Miady amin'ny fanamboarana toby famokarana herinaratra ireo Teratany Amerikanina Cherokee ao Avaratra, lazain'izy ireo fa hanakantsakana ny traikefa ara-panahy ao Kituwah, dongontany masina izay sarobidy toy ny toerana iray nanomezan'Andriamanitra ho an'ny Cherokee ny lalànan-dry zareo sy ny afony voalohany. Inoana fa niaina efa ho nandritra iray alina taona tany ho any izany.
52 metatra (170 feet) eo ho eo ny savaivon'ilay dongontany ary tokony ho 1,5 metatra (5 feet) ny haavony.
Na dia voaaron'ilay Lalàna Fiarovana ny Fasana sy Fampodiana an-tanindrazana ireo Teratany Amerikanina aza ny taolambalon'ireo indizeny (vazimba teratany) – na ny olona na ny kolontsaina – mbola iharan'ny fanimbazimbàna ihany eo imason'ireo Teratany Amerikanina maro ireo rindrin-tany masina antsoina hoe dongontany.
Eo amin'ny Facebook miaraka amin'ireo 2.000 mahery mpankafy ny “TSINJOVY KITUWAH“, manohy miady hitahirizana ilay dongontany tsy ho voakitika ireo Cherokee.
Sarin'ny Kituwah navoaka teo amin'ny vondrona Facebook, avy amin'ny Red Gryphon
Nandefa imailaka tany amin'ny Duke Energy i Hannah Smith, mpanampy ny lehiben'ny fampanoavana miandrakitra ny toby fitahirizana ny Cherokee. Nivoaka teo amin'ny Facing South izany, tranonkalan'ny Ivontoerana ho Fianarana ny any Atsimo. Soritsoritay ny ezaka ho fiarovana an'ilay faritra izay navotan'ny Vondrona Cherokee Tatsinanana tamin'ny 1996.
Rehefa takatro ny filàna herinaratra ary fantatro fa zavatra ilaina ho amin'ny fandrosoana ny fiovàna, nohazavaiko ny faniriako hanaovana izay hanalefahan'ny Duke Power araky izay azo atao ny fiantraikany hita maso hoaterak'io fotodrafitrasa tilikambo io amin'ny traikefa niainan'ny vahoaka Cherokee rehefa hitsidika an'i Kituwah ry zareo. Nampiasa fanoharana aho mba hamaritana ny fiantraikany eo amin'io fijery fahiny ny tranohevan'i Kituwah io, eo am-panantenana fa mba mety hitondra fahatakarana tsaratsara kokoa amin'ny fomba fiantraikany amiko (sy ny ankamaroan'ny Cherokee). Nambarako ho toy ny fametrahana zanatoby famokarana herinaratra eo akaikin'ny Katedraly tsara be iray (tahaky ny Bazilikan'ny Md Petera ao Roma) ny fananganana an'ity endrika indostrialy ratsy tarehy toa “mankarary maso” ity eo akaikin'ny Tanàna reninay, antitra sy masina. Manome hasina ny toerana ao Kituwa sy izay hatsarany sisa tavela ao aminy ny kolontsaina Cherokee, tahaky ny fanomezana hasina ataon'ny ankamaroan'ny olona erantany ny Md Petera noho ny hatsarany miavaka sy maha-toerana fanompoana taloha azy.
Raha vitan'ny Cherokees ny mandresy lahatra ny Duke Energy mba hampiato ilay asa fanamboarana, ho fandreseny faharoa amin'ity taona ity izay. Tamin'ny Janoary 2010, araky ny Bilaogy Avoty Ny Toerana Masina, nanajanona ny fanamboarana seranampiaramanidina tao Iolta ny Ministeran”ny Fiarovana – tanàna Cherokee taloha ary toerana fandevenana ao Carolina Avaratra – mandra-pahavitan'ny fanadihadihana lalina. Fa tsy nanam-bintana loatra ireo toerana teratany Amerikanina Cherokee hafa, araky ny namintinan'ny Facing South azy:
Tamin'ny herintaona, dongontany teo akaikin'ny Oxford, Ala, no nampiasaina ho fanariana vovoka ho an'ny fanamboarana Klioba iray an'ny Sam's ary toa tsikaritra fa nisy dongontany Indianina hafa tao amin'ny faritran'ny Oxford nanjavona nandritra ny fanamborana ny kianja monisipaly fanaovana fanatanjahantena.
Tamin'ny faramparan'ny andian-taona 1990, toerana fandevenana Indianina tao Nashville, Tenn, no nopotehana mba hanamboarana Wal-Mart Supercenter iray, raha toerana fandevenana Indianina hafa manaraka ny Renirano Cumberland tao amin'io tanàna io ihany koa no voahelingelina nandritra ny fanamboarana kianja ho an'ny ekipan'ny Ligy Nasionalin'ny Baolina Kitra Tennessee Titans. Ary manamboatra lalambe mizara efatra eo akaikin'ny Tsangambato Fahatsiarovana Nasionaly Ocmulgee, toerana manana dikany goavana ho an'ny vahoaka (n'ny Sakelidrano) Muscogee ny tao Zeorzia.
Misy sary betsabetsaka ahitana an'i Kituwah afaka jerena eto sy eto